नमस्ते, म चाहन्छु, एक केटा धेरै प्रश्नहरू सोध्न यस्तो सामान्य प्रश्न, कसरी पुरानो छ, उहाँले जहाँ गर्छ त्यो जीवित र के सोख उहाँले छ, म पहिले नै सोधे शायद यो पनि विचार को म के गर्न सक्छ उहाँलाई सोध्न छैन किनभने हामी एक विषय पाउन को कुराकानी र उहाँले पनि सभा को समय मा कुनै समय छ । जवाफ अधिक विस्तृत बारे प्रश्न शौक छ । के भने, उहाँले अझै पनि छ उहाँले कस्तो बिहान अर्ब विकल्प मंच. त्यसैले पनि यस बारे कुरा पहिले नै छ । के म सोध्न सक्छ उहाँलाई अब । मलाई थाहा छ, त्यसैले म अब ‘मित्र’ मलाई प्रेम. केही महिना पहिले, म उहाँलाई सोधे पछि, उहाँले कुनै समय थियो, के उहाँले साबित हुन सक्छ. (सोख, ड्राइभिङ लाइसेन्स, विद्यालय र यति मा). बिस्तारै म सोच्न मलाई समय उसलाई भेट्न र मेरो ठूलो बहिनी, म उहाँलाई सोध्न. के तपाईं गर्नुपर्छ लाग्छ. म एक केटा मा मेरो क्लास म साँच्चै धेरै राम्रो. भेट आफ्नो मित्र र मेरो प्रेमिका छ । म सोच भएको छु, अन्तिम दिनहरुमा पटक हो । म समय जस्तै एक्लै. अब, मेरो प्रश्न छ, म उहाँलाई सोध्न मा वा छ भनेर पनि व्यक्तित्वहीन. यो पहिले सबै कुराहरू अब मान्छे बाहिर त्यहाँ. पनि, म छु त्यसैले डर उनी भन्छन्, कुनै दिन कृपया मलाई केही सुझाव. अब, अझै पनि यति अनुभवहीन छु, म अचानक बिरामी र, पहिले एक सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्न निमन्त्रणा छ । म बस अस्थायी बिरामी, अन्य लाग्छ भनेर झूट छ । के सबै भन्दा राम्रो ध्वनियां. यति मूर्ख प्रश्न देखिन्छ, कृपया मा आफैलाई राखे मेरो अवस्था र कुनै मूर्ख टिप्पणी गर्नुहोस्.
म लेख्न एक एसईओ ठूलो-देख बच्चा, च्याट नीरस छ र म थाहा छैन के म उहाँलाई सोध्न. तपाईं सुझाव सिक्न, को. हामी बारेमा कुरा परिवार र सोख, म के गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न च्याट नीरस छ । अरे त्यसैले म एक केटी संग प्रेम मा भेट, तपाईं र म र कसरी म एक बैठक प्रश्न छ बस छुट्टी मा तर म मिल्यो अगाडि को छ, आफ्नो छुट्टी को प्रश्न छ कि हामी भेट्न चाहन्छु, म मिल्यो धेरै देखि बालिका प्राप्त जहाँ म बारेमा सोधे त्यसैले तपाईं कसरी मा सुझाव अग्रिम धन्यवाद म एक पाठ मा लेखिएको जर्मन र सोध्न चाहन्थे भने कसैले वोल्ट छ । बारेमा पढ्न सक्छ, यो सही छ, आवश्यक यदि. म पाठ एक व्यायाम रूपमा एक वर्ग लागि काम गर्न अर्को हप्ता. सारांश: यो प्रकाशित छोटो कथा»सञ्झ्याल थिएटर द्वारा»अष्ट्रीया लेखक, बारे छ जो एक महिला गर्न विषय छ, एक गलतफहमीले, कि, उनको वृद्ध छिमेकीलाई पागल थियो, त्यसैले त्यो प्रहरी भनिन्छ हुनत, यो केवल सूचीबद्ध एक»विन्डो थिएटर लागि»एक जवान केटा छ । पुरानो हत्केलामा बन्द मा जीवित, ज्योति जगाउन चासो को महिला मा बसोबास गर्ने अंत सित तल्ला को एक जीर्णोद्धार घर छ । जबकि पत्नी अझै अनिर्णीत छ कि उहाँले मेरो छ, अब यो सुरक्षित छ किनभने आफ्नो ज्ञान, अपार्टमेंट खाली छ र तल एक कार्यशाला. रूपमा छिमेकीलाई गर्न थाल्छ लहर सेतो कपडा, माथि सम्म, यो, झटका संग रूमाल र त्यसपछि एक पगडी प्रयोग, महिला छ भनेर निश्चित यो मानिस पागल थियो. पुरानो मानिस पछि गर्छ टाउको खडा भनिन्छ, महिला प्रहरी, बनाउन क्रम मा यी भन्दा छिमेकीको ध्यान । जब प्रहरी टूट ढोका, याद संग मानिस आफ्नो फिर्ता गर्न तिनीहरूलाई अझै विन्डो मा. महिला भन्दा देखिन्छ विन्डो देखि पाता र एक केटा अनुहार, हाँस्नुहुन्छ, भन्दा, लहराते, र आफ्नो मा तकिया र कम्बल वरिपरि काँध छ । महिला अब चिनेर कि पुरानो मानिस सूचीबद्ध छ एक सञ्झ्यालको-थिएटर को लागि यो जवान छ । लेखक चाहनुहुन्छ व्यक्त गर्न यस कथा छ कि संचार गर्दैन सधैं मिलेर मात्र शब्द छ । मासु महिला हुँ र । छ को डिग्री संग सम्पर्क एक केटा मलाई जस्तै छ । शायद हुनेछ लेख्न के हामी मा लागि लगभग सप्ताह, तर हामी कहिल्यै पाउन कुराकानी को एक विषय छ । म उहाँलाई प्रश्न कहिलेकाहीं, तर, अब कुनै प्रश्न आउन मन छ । तपाईं कुनै पनि सुझाव रूपमा के गर्न सक्थे म उहाँलाई प्रश्न, वा हामी के लेख्न. -) नमस्ते त म छु हालै सिकेका मान्छे र हामी तुरुन्तै यो बन्द मारा, धेरै राम्रो, म उहाँलाई जस्तै एक धेरै, र उहाँले मलाई, हामी गर्न सक्षम थिए, लेख्न त धेरै र यति तर कुनै तरिका, हामी हाल छ कुनै कुराकानी विषय: (अब के. हाय, म एक केटा भेटे, जसलाई म राम्रो सम्पर्क छ । म उहाँलाई निम्तो गर्न एक पटक एक पार्टी, उहाँले यस्तो लेखे, उहाँले छ कि सुपर खुसी छ । तर, उहाँले मा थियो, यो बिरामी दिन र आउन सकेन (उहाँले शायद कुनै इच्छा थियो, तर माफी मागे छ, व्यक्तिगत मलाई र मलाई दिनुभयो एक झोला भालु). अब लगभग महिना बितिसकेको छ र मा बिदाहरू छ किनभने हामी, प्रत्येक अन्य बुझ्न साँच्चै राम्रो व्यक्तिगत (लागि मरेका प्यान्ट). कष्टप्रद भन्दा त्यहाँ छ । म फेरि सोध्न. अरे, म लागिरहेको छु शुक्रबार एक केटा संग बरफ मा डिस्को छ । हामी लेख्न सबै समय र थाहा नै धेरै प्रत्येक अन्य शीर्ष मा. यो समस्या छ, म लेख्न जारी उसलाई तर विषयहरू यस्तो सोख, गतिविधिलाई, हामी सबै यो माध्यम भएको छु पहिले नै छ । म उहाँलाई सोध्न के हामी लेख्न गर्नुपर्छ वा कुनै पनि खेल मा. म त्यो हुँ अरे म मिल्यो एक, केही सप्ताह पहिले म एक केटा भेटे. म भएको छु लेखन केही समय को लागि एक केटा र चासो छ उहाँलाई । हामी दुवै वर्ष पुरानो र साथ छ, हामीलाई एक सानो थाह (सोख, गतिविधिलाई, परिवार). अब, हामी सधैं आफैलाई सोध्न प्रत्येक अन्य, तर म अब बिस्तारै गिरावट छ । तपाईं यो के हो कुनै पनि विचार के म उहाँलाई सोध्न. म थियो बस संग एक खेल खेल्न एक केटा मा एक खेल द्वारा एक प्रश्नको जवाफ, र त्यसपछि म उहाँले एक मलाई । म कुनै राम्रो प्रश्न छ । सायद तपाईं अझै पनि केही विचार छ. म भएको छु ‘भन्दै धन्यवाद’. नमस्कार समुदाय, बारे एक महिना पहिले म मिल्यो मेरो ‘दल’ मार्फत बैठक पछि मांग । यो त्यो इन्कार गरे । अब, मेरो प्रश्न छ भने गर्नुपर्छ, म फेरि सोध्न. तपाईं मलाई मदत गर्न सक्छ कसरी र के गर्नुपर्छ म लेख्न उनको म धेरै आभारी हुनेछन् । लुज आज, म संग भेट एक केटा. म उहाँलाई सोध्न चाहन्थे अहिले के हामीलाई बीच, हामी थाहा किनभने हामीलाई अब त हामी पहिले देखि नै लेखिएको छ महिना र धेरै अक्सर फोन मा र मलाई लाग्छ म भावना उहाँलाई लागि तर म कसरी थाहा छैन म उहाँलाई सोध्न भने, उहाँले मलाई चाहनुहुन्छ पनि मलाई मदत गर्नुहोस्. संग खेल पास खेल्न सक्छन्, निश्चित मुक्त लागि खेल, यो समय खेल प्रति सीमित छ । खेल पास. ग) छ — दुवै, वा के म भने, म केही खेल खेल्न मुक्त लागि र पनि अनलाइन गर्न चाहनुहुन्छ पूरा र खेल दुवै सदस्यता. म एक केटा जस्तै साँच्चै प्यारो गर्ने छ, र म पनि कहिलेकाहीं भावना प्राप्त भनेर उहाँले मलाई रुचि पनि छ । क्षण मा, हामी बारेमा लेख्न, तर म थाहा छैन के म उहाँलाई सोध्न.
हुन पनि धक्केदार
छ । एक विचार को लागि राम्रो विषय को कुराकानी.
मलाई थाहा छ एक जवान र हामी हेर्न आफैलाई लागि अन्तिम समय रोक्न, राम्रो र सामान र म के कुनै विचार छ म लेख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई । मलाई थाहा छ सबै को आफ्नो सोख र सामान जस्तै कि, र हामी पनि गर्यौं संगीत बारेमा कुरा र स्कूल र सबै छ । र म चाहनुहुन्छ गर्न उहाँलाई सोध्न कुनै प्रश्न संग सेक्स, वा कि हामी भेट्ने वा केहि भन्ने प्रकारको छ ।
← चाहनुहुन्छ पूरा गर्न स्कैंडिनेवियाई मानिसहरू । कालो महिला स्कैंडिनेवियाई विवाह
कसरी एक प्रेमिका पाउन भारत मा कदम →